Asịrị na-etinye ngosi nke Apple Watch Series 3 na Septemba | Akụkọ akụrụngwa
Asịrị na-etinye ngosi nke Apple Watch Series 3 na Septemba
Anyị na-ahụ ezigbo akụkọ gbasara Apple na ụbọchị ndị a ma ọ bụ na mgbe anyị kwusịrị banyere atụmatụ ọdịnihu ha nwere na Macs, asịrị banyere mwepụta nke atọ nke smart smart ụlọ ọrụ ahụ dịkwa na tebụl. N'okwu a anyị kwuru banyere ihe ga-abụ Apple Watch Series 3, ihe omuma ohuru nke elekere Apple nke o doro anya na ọ ga-agbakwunye batrị na setịpụrụ, ikekwe njikọ data LTE nke ga-ekwe ka ngwaọrụ ahụ nwekwuo onwe ya na iPhone na ekwuru na ọ nwere ike itinye igwefoto.
Maka ugbu a anyị nwere isi mmalite dị iche iche na tebụl na-ekwenye na Apple na-arụ ọrụ ugbu a na ụdị ọhụụ nke elekere smart, na-ahapụ mbipụta a na-adọba na mbụ Nke ahụ ga - adị iche naanị ma ọ bụrụ na akụrụngwa akụrụngwa dị n’elu agaghị enwe ike itinye aka na atụmatụ ugbu a. Mana enweghị nnukwu mgbanwe a na-atụ anya na imepụta elekere ahụ, ọ bụ eziokwu na ọ naghị ere nke ọma dịka ha ga-achọ na Cupertino n'agbanyeghị na ọ bụ otu n'ime igwe elekere kacha mma.
Emebere Apple Watch afọ ole na ole gara aga, kpọmkwem na ọnwa nke Eprel 2015 na kemgbe ahụ ọ ghọrọ ọtụtụ ihe site na ịgbakwunye GPS ma ọ bụ mmiri na-eguzogide ruo mita 50, mana ihe meziwanyela ngwa Apple kachasị bụ ịrụ ụka adịghị ya na sọftụwia ya. Ugbu a, a na-atụ anya ka ihe ngosi Apple Watch ọhụrụ a bụrụ ntakịrị nke onwe nke iPhone n'ihi njikọta mkpanaka, mana nke a bụ ihe a na-akọkarị na ọ ga-adị mkpa ịenta ntị na akụkọ na-esonụ ma ọ bụ asịrị iji hụ ihe bụ eziokwu na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Asịrị na-etinye ngosi nke Apple Watch Series 3 na Septemba
Huawei meriri otu n'ime iwu ikpe gbara megide Samsung maka patent
Mmelite Pebble kachasị ọhụrụ ga - eme ka ngwaọrụ gaa n’ihu na - arụ ọrụ ebighi ebi